Mbo mbuli gị ahịa na arụpụtaghị ihe ndị a 6 Hacks | Martech Zone
Kwa ụbọchị, ọ dịka ọ nwere obere oge anyị nwere iji lekọta ọrụ anyị. Ọ bụ ihe na-emegiderịta onwe ya ebe ọ bụ na enwere ọtụtụ ngwa, hacks na ngwaọrụ ndị na-enyere anyị aka ịchekwa oge n'oge a. Ọ dị ka ezigbo ndụmọdụ na aghụghọ nke kwesịrị ịchekwa anyị oge na-ewere nnukwu nsogbu na arụpụtaghị ihe anyị.
Ndị a bụ ụfọdụ ụzọ na ngwaọrụ m na-eji azọpụta onwe m na ndị ahịa m oge karịa ma melite arụmọrụ anyị niile.
Hack 1: Sochie Oge Gị Okpukpe
Anọ m na-arụ ọrụ nke ọma karịa afọ 10 ugbu a ma ana m asọpụrụ echiche nke ịdebe oge gị ka ị na-arụ ọrụ. Enwetụbeghị m iji lelee ndị ọrụ m, mana achọpụtala m nke ahụ ọ pụrụ ịba uru n'ezie maka ụfọdụ ngwa.
Ruo ihe dị ka otu ọnwa, ana m enyocha oge m maka ọrụ ọ bụla m rụworo. Maka ọrụ ndị dị mgbagwoju anya dịka ịrụ ọrụ na atụmatụ ịre ahịa anyị na ihe dị mfe dị ka ide ozi email. Agwara m ndị ọrụ m ka ha mee otu ihe ahụ otu ọnwa, maka ndekọ nke onwe ha. Nsonaazụ bụ mmeghe anya.
Anyị ghọtara otú oge anyị si lara n'iyi na ọrụ na-enweghị isi. Na mkpokọta, anyị nọrọ ọtụtụ ụbọchị anyị ede ozi ịntanetị na nzukọ, na-arụ obere ọrụ. Ozugbo anyị bidoro ileba oge anyị anya, anyị ghọtara mgbe oge anyị lara n'iyi. Anyị chọpụtara na ndị ahịa anyị na-ere ahịa etinye oge dị ukwuu na-abanye data n'ime CRM anyị kama ịgwa atụmanya na ire nke anyị amaghị software. Anyị mechara mechaa gbanwee usoro ahịa anyị na njikwa njikwa ọrụ iji bụrụ ezigbo oge.
Amụma kacha mma na-enyere gị aka ịmepụta amụma mara mma nke oge a na nkeji. Amụma ndị e mere na ngwa ọrụ a sitere na websaịtị, nke nwere ike ịgbanwe ma gbanwee. Knowingmara mgbe emepere amụma ahụ na-enyere gị aka ịgbaso n'oge kwesịrị ekwesị, ị ga-enwetakwa ọkwa mgbe ebudatara, tinye aka ma ọ bụ kwụọ ụgwọ na ntanetị. Machiini gị ahịa, mmasị gị ahịa na-emeri ihe azụmahịa.
Banye maka Ndabere Mma maka Free
Hack 2: Rie Live Frog?
Na mbu, anaghị m akwado n'ezie iri nri awọ. Enwere ama ama ama Mark Twain kwuru na ị kwesịrị rie nri awọ ihe mbụ n'ụtụtụ. N’ụzọ ahụ, ị ​​meela ihe kachasị njọ nke nwere ike ime n’otu ụbọchị ma ihe ọ bụla ọzọ mere nwere ike ịka mma.
Frog nke gị bụ ọrụ kacha njọ ga-ekwe omume ịnọdụ ala na ndepụta ndepụta ịme ihe gị. Maka m, ọ na-ijikwa tiketi nkwado ndị ahịa. Kwa ụtụtụ mgbe m gbanyere laptọọpụ m, ana m ewepụta otu elekere ma ọ bụ abụọ iji gụọ ma zaghachi ozi ịntanetị ndị ahịa. Bọchị fọdụrụ dị ka ikuku. Maka ndị ahịa m, ana m akwado ịme otu ihe ahụ. Ndị dị iche iche nwere echiche dị iche iche banyere ihe ha ndụ frog bụ, n'ihi ya, anaghị m atụ aro ọrụ ahụ n'ezie, mana ana m akwado ịme ihe kacha njọ, ọrụ kacha sie ike n'ụtụtụ.
Hack 3: Leverage Social Proof maka weebụsaịtị gị
Inweta otutu ahia site na ire ahia na ewe oge na ego. Ọzọkwa, iwepụta ụzọ ọhụụ iji nweta ndị ahịa chọrọ nchọnchọ na ịrụsi ọrụ ike. Mana enwere ụzọ ị ga - esi nwetakwuo ahịa na - enweghị ego ọ bụla - iji njiri mara mmadụ.
A na-enyocha usoro ịzụ ahịa a nke ọma ma gosipụta na ọ na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ị kwesịrị iji ahụmịhe ndị ahịa gị dị ugbu a na ika gị iji kwenye ndị ahịa ka ha jiri gị na-emefu ego.
Typesdị ihe ngosi ama ama gbasara mmadụ gụnyere nyocha, nkwenye, akaebe, ntughari mgbanwe na ọtụtụ ndị ọzọ. Enwekwara usoro ndị ọzọ dị ka ọkwa ntughari.
Ọ bụrụ na i nweela ndị ahịa afọ ojuju, iji ahụmịhe ha na ebe kwesịrị ekwesị na weebụsaịtị gị nwere ike ịme mmetụta dị ukwuu na ọnụego ntụgharị gị na nọmba ahịa gị. Agbanyeghị, enweghị ngwọta niile dabara adaba ma ọ were nnwale iji nweta usoro ngosipụta mmekọrịta ọha na eze. Ozi ọma ahụ bụ, ọ na-arụ ọrụ ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Hack 4: Were Were Online
Ọtụtụ ndị otu ahịa ka na-ejikwa usoro ọdịnala ebe ha chọrọ izute atụmanya na mmadụ iji mechie azụmahịa ahụ. Ọ bụ ezie na nke a nwere ọtụtụ uru, enwerekwa nnukwu mbubata. Oge ọ bụla ị gara nzukọ, ị na-efufu nnukwu oge na ego, n’amaghị ma nzukọ ahụ ọ ga-abụ ire.
Enwere ọtụtụ ngwaọrụ n'oge a nke na-eme ka ọ dịkwuo mfe imechi ahịa. Conferencing ngwa ọdịnala dị ka Mbugharị -enye gị ohere ịkpọ oku vidiyo tupu ị hazie nzukọ na mmadụ. N'ụzọ ahụ, ọbụlagodi na ịnweghị ire ere, ị ga-efu naanị oge 15 nke oge gị karịa ụbọchị dum iji gaa atụmanya ahụ.
Hack 5: Mmezi gị Ahịa na Marketing Teams
N'ọtụtụ ụlọ ọrụ m rụrụ ọrụ, a na-agbanye usoro ire ere maka otu ihe kpatara ya. Ngalaba na-ere ahịa amaghi ihe ngalaba ahia na-eji ọdịnaya na ahịa ya eme ma n'otu oge ahụ, ngalaba azụmaahịa enweghị nkọwa banyere ihe ahịa na-ezute kwa ụbọchị. Dịka nsonaazụ, ọtụtụ ozi na-efu ma ngalaba abụọ enweghị ọrụ.
Iji mee ka ìgwè abụọ ahụ nọrọ n'otu ibe, ọ dị mkpa ịnwe nzukọ mgbe niile ebe ndị ahịa na ndị ahịa na-eduga ma ndị otu nwere ike ịnọdụ ala tụlee ihe na-eme na ngalaba nke ọ bụla. Ahịa ahịa kwesịrị ịma banyere mmekọrịta nke ndị ahịa na-ere ahịa na ndị ahịa. N'otu oge ahụ, ọ dị mkpa ka ndị ahịa mara maka ọdịnaya ndị ahịa na-eche ihu ka ha nwee ike ịhazi ụzọ ha mgbe ha na-akpọtụrụ atụmanya ọhụrụ. Naanị ihe ọ ga-ewe bụ nkeji iri na ise n’izu na ma nke gị nkwukọrịta otu na arụpụtaghị ga-akawanye mma.
Hack 6: Nwee More siri ike na na Nzukọ Nzukọ
Ọ bụrụ na mmadụ si n’òtù ahịa ahụ na ndị ahịa nwere nzukọ, ha nwere oge niile n’ụwa. Agbanyeghị, maka nzukọ dị n'ime, oge anyị pere ezigbo mpe. Cheta oge nyocha anyị mere? Anyị mụtara na anyị na-etinye 4 awa kwa izu na nzukọ na-eme ihe ọ bụla maka ahịa anyị ihe mgbaru ọsọ.
N'oge a, anyị na-amachi nzukọ anyị niile na minit 15 n'oge kachasị. Ihe ọ bụla karịrị nke ahụ kwesịrị ozi ịntanetị na ọ bụ ihe ịrịba ama na ebumnuche nzukọ ahụ adịghị edozi nke ọma. Nke anyi ọrụ ekele esiwo n'elu ụlọ anyị na-echekwa ọtụtụ oge n'oge a - ekele maka mbanye anataghị ikike dị mfe.
Ndetu ikpeazụ ...
Otu nnukwu ndị ahịa dị mkpa maka ụlọ ọrụ chọrọ ịba ụba ego ha nwere na ikike ịbawanye. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime usoro ndị anyị ji eme ihe iji hụ na ndị ahịa anyị na-arụpụta ihe dị ka o kwere mee, enwere m olileanya na ị bara uru. Ikekwe ihe kachasị mkpa ebe a bụ na ọ bụghị ihe ọ bụla na-arụpụta ọrụ na-agbakwunye na akpaaka na teknụzụ dị elu - ị nwere ike nweta ihe dị ịtụnanya naanị site n'ịgbanwe ụfọdụ omume na omume gị.
Tags: ntọghata .ma Ọkwaendorsementsahia na ire ahianzukọ n'ịntanetịonline ngosingwa ahịa n'ịntanetịamaghịamaghị softwareNyochaire na ire ahịanzukọ ahịaarụpụtaghị ahịankwanye ahịaAmụma Ahịaahịa nsusonkwado mmadụtestimonials
Adam Hempenstall bụ onye isi na onye malitere ntọala dị mma, sọftụwia dị mfe maka ịmepụta amụma mara mma, mmetụta dị elu na nkeji. Ebe o nyeere ndị ahịa ya aka na Better Proposals merie $ 120,000,000 + n'ime otu afọ naanị, ọ malitere ụlọ akwụkwọ University nke mbụ ebe ọ na-ekenye usoro azụmaahịa kachasị mma.